Khaladaadkii nuclear-ka ee lagu burburin gaadhay adduunka | Gaaroodi News
Xaaladdu waxay usii xumaatay si deg deg ah oo taariikhda gashay. Taas waxaaba kasii darneyd markii saldhig ay ciidamada cirka lahaayeen oo halkaas u dhawaa ayuu qof ka sameeyay khalad kale. Halkii uu daari lahaa qeylo dhaanta digniinta ee caadiga ah ayuu daaray mid ka duwan taas. Dhammaan duuliyeyaashii ayaa maqlay digniin deg deg ah oo u sheegeysa inay durba diyaaradaha kiciyaan. Shimbiraha noocan ah ayaa lagu yaqaannaa inay bixiyaan qeylodhaan been abuur ah
Diyaaradihii la kiciyay ayaa loo sheegay in ay saldhigyadoodii ku laabtaan. Duuliyeyaasha markii ugu horreysay ee ay tallaabada qaadayeen waxay si xaqiiqo ah u hubeen in uu billowday Dagaalkii Saddexaad ee Adduunka. Habka loo rido gantaal la mid ah kii uu Ruushka khatarta u maleynayay
Sanadkii 1958-kii, diyaarad ayaa si kama’ ah bambo nuclear ah ugu ridday guri ay qoys dagganaayeen qeybtiisa dambe. Waxaa mucjiso noqotay in qofna uusan ku dhimanin shilkaas, inkastoo digaag ay qoyskaas lahaayeen uu halkaas ku le’day. Goobtii uu xayawaanka loo yaqaanno Oorsada khatarta ka abuuray sanadkii 1962-kii
Iyadoo daqiiqao uun ay ka harsan yihiin inuu go’aan gaadho, ayey garteen in gantaalka uu ku wajahnaa badda, wax halis ahna uusan ku ahayn. Sarkaal milatariga ka tirsan oo sida boorsooyin ay ku jiraan qalab loo adeegsado nuclear-ka